26/10/2010 - Communiqué de la Mouvance RAVALOMANANA
L'absolue priorité actuelle est donc, sans détour et se laisser influencer par les sirènes, d'accorder au Peuple Malagasy toutes ses chances de sortir dignement et avec succès de la crise dans laquelle, il a été trop injustement plongé, en mettant tout en oeuvre afin que le processus initié par la CNOSC, avec l'appui de la Communauté Internationale, aboutisse le plus rapidement possible.
COMMUNIQUE-MOUVANCE-RAVALOMANANA.pdf 202.76 Ko
Miezaka mafy manetsi-tadiny ny FATE manoloana ny fitadiavam-bahaolana amin’ny krizy izay lalovantsika amin’izao fotoana. Manjaka loatra ao amin’izy ireo ny fankahalalana olon-tokana hany ka tsy sahiny sedraina ny lalana mitondra ny Firenena mivoaka amin’ny haizina. Sarotra hoazy ireo tokoa ny manaiky fa ny fiverenana amin’ny ara-dalàna ihany no vahaolana ho an’ny Malagasy amin’izao fotoana. Atahoran’ny mpanongam-panjakana ny hamela malalaka ny rehetra hilatsaka satria fantany fa tsy maintsy ho lany ny Filoha RAVALOMANANA rehefa milatsaka ho kandida. Izy rahateo efa nanambara mazava fa tsy maintsy hilatsaka ary vonona hanavotra ny Firenena amin’ny alalan’ny paikady mazava sady mahomby. Io no tsy zakan’i tgv sy ny forongony hany ka minia mikipy ary tena miziriziry izy ireo hanakanana ny fahatanterahana izany na dia efa nosoniavina miaraka aza ny fifanarahana politika hanatanterahana izany.
Tsisy mihaino intsony …
Madilo tanteraka amin’ny fampanantenana poakaty sy ny kabary ambony vavahady ataon-dRajoelina ny Malagasy. Hany vao mainka tsy dia misy liana amin’izay lahateniny intsony rehefa manao fitsidiham-paritra na mitokana foto-drafitrasa ny tenany. Nandritra ny famindram-pahefana teo amin’ny Jly Razafindrakoto sy ny Jly « Bômba » androany izao dia mbola nitohy indray ny « toraka blao ». Nambarany fa dia hiampy ny angidim-by hoentina hiady amin’ny asan-dahalo any atsimo ary hojerena manokana ny momba ireo foloalindahy mamita iraka any amin’ireny tany « mafana » ireny. Ny hany tena mampanahy dia ny filazany fa hanamafy ny fiaraha-miasa amin’ny foloalindahy Malagasy ny fanjakana frantsay. Efa nozaraina tamintsika hatrany fa rehefa ny mpanjanaka no tafiditrra lalina amin’io resaka filaminana io dia mety tondro ratsy ho an’ny fiandrianam-pirenena izany.
Befandriana Avaratra : mandinika na dia mangina aza
Madiva hitoka-monina tanteraka ny distrikan’i Befandriana Avaratra sy ny manodidina ankehitriny noho ny tsy fahazain’ny fitondrana amin’izao fotoana. Tsy misy intsony ny fikojana ny lalana izay mampifandray ireo distrika ireo hany ka manano-sarotra ny fifanakalozana. Raha ny filazan’ny mponina any an-toerana dia efaina 10.000 Ariary ny 80 km amin’izao fotoana noho izay haratsian-dalana izay. Tetikasa maro ho fampandrosoana ny faritra SOFIA no efa nipetrapetraka tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha RAVALOMANANA saingy noho ny sompatra dia niato tanteraka ny fikarakarana iny faritra iny.
Tsy toa ireo vitsy an’isa mihinana am-bolony ny vaovao alefan’ny hainoamanjerim-panjakana noho izany ny mponina any an-toerana fa mandinika tsara ny marina sy ny fitaka voizina. Tsy mahita afa-tsy TVM sy RNM manko izy ireo saingy afaka mifanabe amin’ny fifanakalozan-kevitra kosa.
Nambaran’ny solotenan’ny vahoaka any an-toerana hatrany fa jiolahy lavitra mihoatra ny dahalo an-tanety ny malaso ambony latabatra ao amin’ny fitondrana. Halatra, kolikoly, fanaparam-pahefana no zary sakafon’ny mpitondra amin’izao fotoana ary lavitra azy ireo ny hitsinjo izay mahasoa ny vahoaka. Raha afaka nisitraka tombontsoa maro ny tantsaha tamin’ny fitondrana RAVALOMANANA dia mitrongy vao homana izy ireo ankehitriny. Niato avokoa rehefa mety fanampiana sy fanamorana fihariana rehetra noho ny fanonganam-panjakana. Hoan’ny mponina any Befandriana Avaratra sy ny manodidina izany dia ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA eo amin’ny fitondrana ihany no afaka hanarina izao gaboraraka ataon’ny FATE izao ary nanome toky ny solontenan’izy ireo fa vonona hiara-miasa hahatrarana izany tanjona izany.
Fodian’ny Filoha RAVALOMANANA : mitaky asa fa tsy kabary (+vidéo)
Andro vitsy lasa izao dia namafisin’ny Filoha RAVALOMANANA tamin’ny fihaonany tamin’ireo mpiray tanindrazana mila ravinahitra any Frantsa fa ny tenany ihany no mandray an-tanana ny fiverenany an-tanindrazana. Tao anatin’ny efa-taona latsaka nitolomana ho an’ny fiverenan’ny ara-dalàna mantsy dia ny 10%n’ny asa sisa no notakian’ny Filoha tamin’ny mpiara-dia aminy. Ny 90%n’ny asa kosa dia vitany eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy lavina fa sarotra ny raharaha satria miziriziry ireo vitsy an’isa manam-basy saingy ny marina tsy mba maty na dia fisaka aza.
Hatramin’ny 2009 dia nahavita namparefo an-dRajoelina ny fizotoan’ny vahoaka miakatra kianja. Efa nampiasa ny hevi-dratsy rehetra Rajoelina handravana an’io Magro io saingy nandamoka hatrany izany. Mila hamafisina sy aely manerana ny Nosy ankehitriny fa misy asa tokony hatrehin’ny mpandala ny ara-dalàna isanandro. Na dia efa azo antoka aza fa « premier tour » dia vita ny fandresen’ny Filoha RAVALOMANANA amin’ny fifidianana dia ilaina ny fanomananana ny sehatra rehetra ahafahana mizara ny lalna tiany hitondrana ny Firenena. Tokony hazavana amin’ny mpiara-belona rahateo fa efa nanaporofo ny fahafahany manavotra an’i Madagasikara ny Filoha RAVALOMANANA ary azo antoka ny fahombiazan’izany. Tsy natao handray fotsiny arak’izany ny vahoaka mandala ny ara-dalàna fa tokony hijoro ho mpizara ihany koa mba ho matotra ara-potokevitra ny safidi’ny Malagasy amin’ilay andro iray fa tsy sanatria safidin’ny « manaiky fotsiny » ka any aoiriana vao latsa-nenina.
Riri Be : « tsy misy antenaina amin’ny FFM » (+vidéo)
« Natao ankilabao ny ankolafy politiika mananana ny maha-izy azy eto amin’ny Firenena » hoy i Riri be raha miresaka mikasika ny FFM. Lazaina anefa fa fampihavanam-pirenena no antom-pisian’io rafitra io saingy lohalaharana sahady amin’ny fanilihana raha ny fomba fandrafetana azy. Amin’izao toe-draharaha misy eto amin’ny Firenena izao anefa dia heverin’ny filohan’ny zatovo fa tsy misy ankoatra ny fifampihavanana tena vokatry ny fo no fototra hanorenena Repoblika vaovao. Marihina fa i Riri be dia isan’ireo nitarika barazy hanaovana fahirano an’Antananarivo tamin’ny taona 2002 saingy nahavita nifandray tanana tamin’ireo tsy nitovy hevitra taminy rehefa nivoaka ny fonja 7 taona taty aoriana.
Sarahim-bazana ny samy Malagasy amin’izao fotoana. Hatrany amin’ny anjerimanontolo dia volena adim-poko avokoa. Nampita antso avo amin’ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay moa ny filohan’ny zatovo mba tsy hitatra loatra izany ka hanimba ny firaisan-ninam-pirenena. Hisy rahateo ny hetsika santatry ny fifampihavanana hataon’ny « Mamiko ny Taniko Madagasikara » izany fikambanana mbola iasan’i Riri Be ihany koa.
Fikaonan-dohan’ny Faritra 22 : fampiharana ny tondro zotra ihany koa (+vidéo)
3000 mahery ireo mpizaika niatrika ny asam-baomiera voalohany mandritra ity fikaonan-dohan’ny faritra 22 ity androany. Ny 1800 amin’ireo dia avy any amin’ny Faritra ankoatra an’Analamanga avokoa. Raha ny fanazavana nentin’i Kotomanantsoa Remi Lion izay mpandrindra izao hetsika izao dia notohanam-potsiny ireo mpiray tanindrazana avy any amin’ny faritra noho ny fahasarotana amin’ny fotodrafitrasa fandraisana azy ireo eto an-drenivohitra.
Maika amin’ny fitadiavana vahaolana amin’ny krizy izy ireo indrindra fa misedra olana avokoa ankehitriny ny seha-pihariana rehetra eto Madagasikara. Izany indrindra no nanosika ireo mpandraharaha sy olo-be avy any amin’ny Faritra nikarakara izao fampivondronana izao. Ezahin’ny mpandrindra arak’izany ny hazahoana manangona ny hevitry ny mpiray tanindrazana rehetra mba hahitana vahaolana tena iombonana amin’izao krizy izao. Nambaran’i Kotomanantsoa fa fanatanterahana ny andininy voalohany ao amin’ny tondro zotra ihany koa izao fikaonan-doha izao ary atao indrindra ao anatin’ny 60 andro nomen’ny SADC hahitan’ny Malagasy lalan-kivoahana amin’izao krizy izao. « Aorian’izao dinika izao » hoy hatrany ny mpandrindra « dia hatolotra ny FFKM ny fehi-kevitra satria izy ireo no efa ankatoavin’izao tontolo izao hitarika ny fifampiresahan’ny samy Malagasy ».
Projet machiavélique de la France : "Neutralisation de Marc Ravalomanana"
destinataire: autorite uniquement
1. sur la neutralisation de m.marc ravalomanana
nos partenaires africains sont en train de remplir leur promesse d'oeuvrer pour la neutralisation politique du sujet. les autorites judiciaires de pretoria entendent se servir comme convenu des plaintes deposees par des citoyens malgaches aupres des tribunaux sud africains contre le sujet pour rendre impossible son retour a madagascar nonobstant les dispositions de la fdr.
au besoin, nos agents sur place a madagascar et en afrique du sud sont en mesure de susciter des preuves materielles qui ne permettraient pas aux tribunaux sud africains de relaxer le sujet.
2. sur la situation securitaire a madagascar
la difficulte des forces de l'ordre malgache a reduire la tension dans la partie sud de l'ile est le corollaire de la mise en oeuvre du dispositif d'affaiblissement de l'outil de defense du pays par nos soins. il a ete suggere donc au phat de faire appel dans la discretion a une assistance militaire privee aux charges de l'etat malgache ou ce qu'il en reste.
il ne serait en effet pas productif pour la suite des operations que nous souhaitons conduire a madagascar de permettre aux forces de securite locales de se doter en materiel adequat ou meme d'acquerir l'esprit de combat necessaire pour faire face a leur mission de securisation de leur territoire.
le personnel militaire que nous y avons detache dans le cadre de l'accord de defense n'a jusqu'ici eu aucun mal a persuader l'etat major de l'armee malgache de se fier aveuglement aux solutions que nous leur suggerions dans la gestion de la question securitaire pour le pays. a ce sujet, il serait pertinent de geler l'enveloppe qui est consenti au mois au college d'officiers superieurs malgaches qui servent a porter notre point de vue au sein des cercles de decision a antananarivo. en effet, donner continuellement satisfaction a leur demande de revision a la hausse du prix de leur forfait pourrait porter a mal dans un court delai a l'enveloppe dont nos agents locaux en contact avec eux. par ailleurs, le risque d'un revers militaire pour nos allies sur place n'est pas tel que le concours de ces officiers generaux soit absolument indispensable. leur maintien dans notre operation d'influence n'etant qu'une mesure de precaution pour le cas tres improbable sur le court terme d'un retournement de l'armee contre la hat.
la solidite du pouvoir de la hat est malgre tout a relativiser en raison des difficultes que nos agents ont rencontre pour reduire l'influence de l'opposition locale. a l'heure ou la presente note est redigee, il existe une inconnue quant a l'etat d'esprit d'une large partie des forces de l'ordre malgache quant a l'attitude qu'elle adoptera en cas de reaction massive et energique de l'opposition qui reste acquise a m.marc ravalomanana.
Cst Henri Randrianjatovo : « Ruffine Tsiranana irery no ao anatin’ny Ankolafy RAVALOMANANA fa tsy ny antoko PSD »
« Ny Tim, Teza, MFM, AMF/3FM ary ireo fikambanana vitsivitsy ». Ireo no mikambana anatin’ny ankolafy Ravalomanana. « Tsy misy izany PSD izany mihitsy ao hatramin’izay, fa Ruffine Tsiranana irery no ankolafy Ravalomanana ». Ny Cst avy any Faratsiho Henri Randrianjatovo no nampahafantatra izany nandritra ny fandraisany ny fitenenana teo amin’ny Kianjan’ny Magro.
Somary very fanahy mbola velona ihany anefa ny ankamaroan’ny mpandala ny ara-dalàna raha naheno izany satria toa mifanipaka be ihany amin’ny zavatra voizina hatramin’izay ity fanambarana ity. Raha tsiahivina tokoa manko dia isan’ireo antoko mpikambana ara-dàlana anatin’ny ankolafy Ravalomanana ny PSD, raha ny fanambarana am-pahibemaso nataon’ny ankolafy Ravalomanana ny 1 Aogositra lasa teo, tao Bel’air. Ny mpitondra tenin’ny ankolafy Ravalomanana, sady mpitondra tenin’ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa, Guy Rivo Andrianarisoa rahateo no namaky izany fanambarana iombonana izany.
Fanambarana natao ny 01 Aogositra :
Mipetraka ny fanontaniana : hitondra fitoniana eo anivon’ny ankolafy Ravalomanana ve ny fanambarana tahaka ity androany ity, izay toa miendrika disadisa anatiny ihany ? Tsy vao miaka hanamafy ny endrika tian’ny fahavalo omena ny ankolafy Ravalomanana ve ny fanambarana miendrika ampamoaka tahaka izao ? Efa tsy vita mangingina intsony ve ny resaka ka voatery tsy maintsy natao ren-tany ren-danitra ny fanilihana mivantana ny antoko PSD ? Fotoanan’ny fifanandrinana anatiny ve izao, izay azo inoana fa hanome endrika ratsy ny tolona ka mety hahakivy ny filoha Ravalomanana izay toa miady irery ihany ? Ny filoha manko miezaka mafy ny mamaha ny olana, na dia any an-tsesitany aza, nefa toa mbola vesarana olana anaty ihany.
Atsipy ny tady eny an-tandrokin’ny omby, atsipy ny teny any am-pon’ny mahalala.
FANAMBARANA_ANKOLAFY_RAVALOMANANA 01_08_2012.pdf 1.22 Mo
Andrim-pitondrana : mitaky fanovana fomba fiasa ny fiverenan’ny Ankolafy RAVALOMANANA (+vidéo)
Maro ny tsy fahatomombanana voalaza fa voamariky ny Ankolafy RAVALOMANA ka nahatonga azy ireo nisitaka ny andrim-pitoindrana rehetra. Ankehitriny, taorian’ny fivorian’ny SADC tatsy Maputo, dia nambaran’ny Filoha RAVALOMANANA ny fiverenana miasa any anaty ao anatin’ny fitantanana ny tetezamita. Araka ny fanehoan-kevitra nentin’i Constant Raveloson anefa dia tokony arahina fanovana fomba fiaraha-miasa izany fiverenan’izy ireo izany.
Nomarihiny ihany koa fa ireo lalàna rehetra izay nolaniana teny Tsimbazaza sy Anosy nefa tsy natrehin’ny avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA dia tokony iverenana ny ady hevitra momba azy. Isan’ny fomba fiasa tokony hamafisina ihany koa, araka ny filazany, ny fametrahana ny vaomiera manokana iraisan’ireo andrim-pitondrana handinihana mialoha ny volavolan-dalàna rehetra mba ho tena iaraha-mitantana marina ny tetezamita fa tsy alokalofan’ny demokrasian’ny mpanongam-panjakana.